Dagaal royale oo yar yar oo wata Munchkin.io | Androidsis
Munchkin.io waa nooca royale dagaalka io taas oo aan ku wajahi doonno ciyaartoy kale waqtiga dhabta ah. Cinwaan aad u soo jiidasho badan oo loogu talagalay Android kaas oo yimaada xilligan ugu fiican marka nuucaan oo kale ah uu socdo.
Ciyaar Android ah in sifiican ayuu u ogolaadaa inuu ciyaaro, in kastoo waqtiyada qaarkood aad seegi karto waxqabadkaas weyn ee ah in ciyaarta cusub ee Supercell ay qadariyo: Isbedelka xiddigaha. Aan aragno waxa dagaalyahan royale uu noogu soo bandhigi karo aragti kore oo aan ku arki doonno ciyaartoy badan.
1 Dagaal royale leh ciyaartoy yar oo ka tirsan ciyaaraha
2 Munchkin.io kama maqna «qaska»
3 Ciyaaryahan furan
Dagaal royale leh ciyaartoy yar oo ka tirsan ciyaaraha
In runta la sheego, way adkaanaysaa in "la liqo" dagaal royale ah aan ka ahayn PUBG Mobile ee Android hadda. In kastoo hadaanan raadin 3D-kaas, xoogaa waan ku nasan karnaa aragtida isometric-ka ee Munchkin.io, cinwaan muuqaal ahaan aad ufiican oo leh xoogaa gacan-wanaag ah oo gacanta-hore ah oo ammaantiisa leh.
Ficil ahaan Munchkin.io waxaan wajaheynaa ciyaar multiplayer leh dagaal-waqtiga dhabta ah. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan isku hallayno dhammaan noocyada hubka fudud, ugu yaraan kuwa aan kala kulannay cayaaraha la soo tuuray, iyo deegaan leh waxyaabo yaryar oo ay ku gabadaan hoosta hoostiisa ama marinno marinno u dhexeeya dhagaxyada, oo markii hore u muuqday inuu noqdo gidaar caynkaas ah oo aan laga gudbi karin.
Anaga oo u daneynayna waan heli doonaa xirfado taxane ah oo aan qaadi karno sidaa darteed labo ayaa firfircoon markasta. Taasi waa, waa inaan ogaanno sida loo xusho kuwa aan xiiseyneyno iyadoo loo eegayo cadawga aan la kulanno iyo habka aan inta badan u ciyaarno. Xirfadaha sida tuurista hubka halista ah ama xawaare sare si loo gaaro qofka ka soo horjeeda oo leh caafimaad yar oo doonaya inuu baxsado sida uu awoodo.
Munchkin.io kama maqna «qaska»
Arrintan dagaalka royale waxaan sidoo kale leenahay xoogaa PVE (Ciyaaryahan ka soo horjeedka deegaanka). Tani waxay ka dhigan tahay inaan yeelan doono cadaw uu maamulo mashiinka aan ku magdhabi karno nafteena isla markaana aan ku helno abaalmarino muhiim ah Taasi waxay tiri, inta aan ku dhiiranayno khariidada, waa inaan isku daynaa inaan uruurino dhammaan lacagaha iyo jawharadaha aan awoodno, maadaama ay qiimo weyn ugu fadhiyaan natiijada ugu dambeysa ee ciyaartaas ka dhanka ah kuwa kale.
Khibradeenna gaarka ah, ama kuwa naga soo horjeedaba aad bay u xumaayeen ama waxay ahaayeen bots fudud (oo ay maamusho mashiinka), maadaama aan 5 dhimasho leenahay, halka inta kale ee "ciyaartooyda" midna uusan lahayn. Maaddaama aan ku dhex jirno ciyaartoy badan, waa ka muhiimsan tahay in aan leenahay dareenka ah inaan la ciyaareyno kuwa kale. Sikastaba, sida ku dhacda PUBG Mobile kulamada ugu horeeya, badanaa waa inay yihiin bots si aan u baran karno makaanikada ciyaarta.
Taasi waxay tiri, waa in la sheegaa in Munchkin.io si wanaagsan loo soo dhoweeyay. in kabadan 15.000 dib u eegiss celcelis ahaan 4,4 dhibcood. Marka wax walba waxay noqon doonaan inaan sii wadno ciyaarista illaa inta aan ka helayno kuwa naga soo horjeeda oo si aad ah loola dagaallamo oo runtii cadaw u ah inay la dagaallamaan milkiilayaasha; Ma noqon karto in midkood uu awood u leeyahay inuu dilo laba ciyaartoy hal dhaqaaq halkan iyo mid halkaas ...
Munchkin.io waa a ciyaar kubbadeed badan oo kugu sugaya gacmo furan si aad uga hor tagto khadka tooska ah ee ka dhanka ah ciyaartoyda kale qaab kale. Wax aad u moodo, iyo in kasta oo ay muddo dheer nala joogeen, ayaa hadda ku qarxaya ciyaaro sida PUBG Mobile iyo Fortnite; yaa noo sheegi lahaa dhawr sano ka hor ...
Farsamo ahaan waa wax aad u wanaagsan oo leh tiro wanaag ah. Kuwaani waa adiga naqshadeynta dabeecadda, aragtida isometric, animations iyo jawi sifiican looga shaqeeyay oo leh fidin wanaagsan. Waxa aan fahmi karin waa waxqabad la'aanta Samsung Galaxy S9. Tan waa in la hagaajiyaa.
Munchkin.io wuxuu ku jiray Play Store toddobaadyo hadda isagoo wax u samaynaya sidii dagaal royale wanaagsan. Hadda waa waqtigiina inaad ku raaxeysataan oo aad u muujisaan ciyaartoydan waxa dhabta ah ee aad ka samaysan tihiin.
Ciyaartoy badan ayaa ku jira waqtiga dhabta ah
Muusiggu ma dhaco
Munchkin.io - Isku dhaca Taajka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Munchkin.io waa nooc dagaal oo nooca io ah kaas oo aad ku isticmaasho hubka noocyadiisa kala duwan
Hada waad ka daawan kartaa YouTube, Facebook iyo Instagram fiidiyowga WhatsApp gudaheeda mahadnaqida qaabka PiP